Home Wararka Gudaha Xirsi Cali Xaaji Xasan: “Ma joojin Dibadbaxa balse waqti kooban ayaa hakinay...
Xirsi Cali Xaaji Xasan: “Ma joojin Dibadbaxa balse waqti kooban ayaa hakinay si aan fursad u siino ergada noo timid”.
Xisbiyada Mucaaradka Somaliland ee Waddani & UCID ayaa ku dhawaaqay in ay joojiyeen dibadbax ka dhan ah Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo maanta lagu waday in uu ka dhaco Gobollada Somaliland.
Xubnaha Mucaaradka ee labada Xisbi ayaa ku dhawaaqay in iyaga oo tixgelinaya ergada dhinacyada kala duwan uga timid awgeed ay u hakiyeen dibadbaxooda balse haddii wadahadalka lagu guuldareysto dib u abaabulayaan.
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ee Waddani, Xirsi Cali Xaaji Xasan oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in ay uga dhammaatay Wadahadal ay la galaan Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi maadaama ballamo horay ay ka baxday.
Dhinacyada la hadlay waxa uu Guddoomiye Xirsi ku sheegay in ay kala yihiin: Salaadiin, Culimo, Guurtida, Ganacsato iyo xubno katirsan Beesha Caalamka in ay kala hadleen hakinta dibadbaxaas sidaasna ay ku aqbaleen.
“Salaadiin, Culima’udiin & Ganacsato is abaabulay oo 31 ah ayaa naga codsaday in aan hakino dibadbaxa, waxa aan taageerayaasheena u sheegeynaa ma aanay joojin mudaharaadyada balse waqti kooban ayaan hakinay, innaga oo ixtiraameyna Ergada inoo timid oo ah Dad la aamini karo si aan waqti kooban fursad u siino inta wanaagga jecel, sidoo kale waxaa nala soo xiriiray Beesha Caalamka oo naga codsaday in aan hakino ama joojiyo waxa aan ku dhahnay waan hakineynaa” ayuu yiri Guddoomiyaha Xisbiga Waddani.
Waa uu sii hadlay Xirsi Cali Xaaji Xasan waxaana uu sheegay in uusan jirin wadahadal xubnaha mucaaradka ay la galayaan Xukuumadda Madaxweyne Biixi balse haddii la kala dhexgalayo wada-xaajoodka imaan karo.
Sababta go’aankaas ay u qaateen xubnaha Mucaaradka ayay ku sheegeen in Madaxweyne Biixi uu marar badan uga baxay ballamo ay wada galeen sidaas awgeed aanay laga maarmin in la helo dhinac kale si martiqaati looga noqdo waxa lagu heshiiyo.
“Wadahadal aan miiska isugu imaaneyno oo aan kawada hadleyno way soo dhammaatay waana soo tijaabinayay, in ku dhaw 60 ama 70 jeer wax ku dhaw ayaa wada fadhiisanay waxna waa mira-dhali wayday xiisa uma qabno, Cid weliba oo wanaagga jecel ee dhexdeeda rabta in ay gasho waan soo dhaweyneenaa oo fursad ayaan siineynaa, Madaxweynaha Jooga ayaa ka dhega-fureystay wadahadalkii dhexdeena” Sidaasi waxaa yiri Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka Waddani.
Maanta oo ah 11ka June 2022 waxaa lagu waday in ay dhacaan dibadbaxyo ka dhan ah Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi balse waxa uu u baaqday dhinacyo kala duwan oo ku baxay si wadahadal xal loogu raadiyo.
Previous articleGanacsiga Qaadka: Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay warka ku saabsan fasixidda Jaadka Kenya
Next articleMaxay Cunnooyinka qaar ay u sababaan Gaastariga?
Safar dheer: Dhamman caruurtoda waxay dhasheen intii ay safarka ku jireen
Magacaabista Ra’isulwasaaraha XFS Ayaa lugu wadaa in laggu dhawaaqo saacadaha...
Dawladda Maraykanka ayaa shirkaddaha Google iyo Aple ka codsatay in la...